गुराँस लाइफको लाभांशमा बीमा समितिकाे कैँची - Aathikbazarnews.com गुराँस लाइफको लाभांशमा बीमा समितिकाे कैँची -
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको लाभांशमा बीमा समितिले कैंचि ललाएको छ ।
भदौं १९ गते बसेको संचाल समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफबाट १३.१०१५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने निर्णय गरी बीमा समितिमा पेश गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीकाे यस अघि कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १३ दशमलव १० प्रतिशत बोनस शेयर परिमार्जन पश्चात बोनस दर १० दशमलव ५० प्रतिशतमा झरेको छ । यस अघि बोनस मात्र प्रस्ताव गरेको कम्पनीले परिमार्जिन लाभांशमा नगदलाई पनि जोड दिएको छ । बोनस शेयर कर प्रयोजनका लागि कम्पनीले शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात रू. ५१ लाख ८६ हजार ५५८ छुट्याएको छ ।
यस अघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि चुक्तापूँजी रू. ९३ करोड ८५ लाख २० हजारको आधारमा १३ दशमलव १० प्रतिशतले हनु आउने रू. १२ करोड २९ लाख ६० हजार बराबरको बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त प्रस्ताव सहित वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गर्दा लाभांश परिमार्जन गरी वित्तीय विवरण पुनः पेश गर्न निर्देशन भएपछि कम्पनीले लाभांश परिमार्जन गरेको बताएको छ । परिमार्जन भएको लाभांश पनि बीमा समितिको स्वीकृति र आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात मात्र कम्पनीले वितरण गर्न सक्नेछ ।
तर, बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वित्तिय विवरणमा परिमार्जन गरी वित्तीय विवरण पुनः पेश गर्न निर्देशन गरेको थियो । बीमा समितिले पुन वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन गरेसँगै कम्पनीको पुन बसेको संचालक समितिको बैठकले १०/५० प्रतिशत बोनस शेयर दिने र सोमा लाग्ने कर वापत ५१ लाख ८६ हजार ५५८ रुपैयाँ (कर प्रयोजनका लागि मात्र) नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ ।